Biography na ịkpa ike nke Hypatia, nwanyị sayensị nke Alexandria | Netwọk Mgbasa Ozi
Taa, anyị ga-ekwu maka otu onye Grik na onye ọkà ihe omimi nke so na ndi nwanyi amara amara n’uwa. Ọ bụ ihe Hypatia. Ọ bụ ada onye mgbakọ na mwepụ Prọfesọ nke Museum nke Alexandria a maara dị ka Theon. Ọ bụ Ptolemy nke Mbụ, bụ́ eze Ijipt, nwere ike iguzobe ihe mgbe ochie ahụ dị n’Aleksandria. N'oge a, ọtụtụ mmadụ chọsiri ike ịmụ banyere sayensị na nkà ihe ọmụma. Ya mere, òtù ndị na-enupụ isi malitere n'okwu ndị a.
N'isiokwu a anyị ga-ekwu maka akụkọ gbasara Hypatia, otu n'ime ụmụ nwanyị mbụ mgbakọ na mwepu n'ụwa.
1 Ihe omuma nke Hypatia
2 Ezinaụlọ Hypatia
Onye ọkà ihe omuma a na onye oru mwepu Enye ama enen̄ede enyene udọn̄ ke mme n̄kpọ emi ẹkedade ẹnam ndụn̄ọde ke ikpaenyọn̄. Ọ bụghị naanị na ọ nwere mmasị na mgbakọ na mwepụ na nkà ihe ọmụma, mana o nwekwara ụfọdụ mmasị maka ịmụgharị mmegharị nke ihe ndị dị na mbara igwe. Mmasị a bụ ruo n'ókè nke na sere tebụl ụfọdụ ebe enwere ike ịkọwa mmegharị niile amaara ruo ụbọchị nke ihe ndị dị na mbara igwe.
Ọ bụ ezie na ọ na-enwe mmasị na nkà mmụta mbara igwe, ọ kachasị na-akụzi mgbakọ na mwepụ. Ọ nwere ọtụtụ ndị na-eso ụzọ ya na nkuzi ya bụ ndị na-akwalite ezi uche. Dika anyi mara, iji ezi uche bu ihe di nkpa banyere sayensi. Eziokwu ahụ bụ na nwanyị a nwere ikike dị ukwuu ịkụziri ndị na-eso ụzọ ya banyere mgbakọ na mwepụ mere ka ekworo na ịkpọasị bilie.
Otu n'ime ndị kacha emebi Hypatia bụ Bishọp Saint Cyril nke Alexandria. Ọbụghị naanị na ọ bụ onye duhiere atụmatụ Hypatia, kamakwa ndị otu na-eso ụzọ Kraịst. Bishọp a boro ya ebubo banyere mmetụta o nwere n'uche gọvanọ obodo ahụ. Site n'ihe a hụtara na a kpaliri gọvanọ a ịkpagbu Ndị Kraịst. Egburu Hypatia nke Alexandria n'ọgba aghara na-ewu ewu. O doro anya na otu ndị na-enyo enyo wakporo ụgbọala ebe ọ na-agagharị, taa ya ahụhụ ma kpọọ ya ọkụ.
N’ụzọ dị mwute, ọrụ ya niile lara n’iyi yana ọba akwụkwọ niile nke Aleksandria. A na-eme nnyocha ndị na-adịbeghị anya bụ ndị mere ka e nwee obi abụọ na ihe na-akpali okpukpe. Nke ahụ bụ, ihe ọmụmụ ndị a na-ekwenye na Hypatia anaghị emegide Iso Christianityzọ Kraịst. Ọ nwere ndị na-eso ụzọ m mụtara na mgbakọ na mwepụ ma ha nọ n'okpukpe niile. Ihe ọmụmụ ndị a na-anwa igosi bụ na e kpuchiri ọnwụ na nchịkọta nke esemokwu ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke dị n'oge ahụ na Alexandria n'ihi ọdịda nke Alaeze Ukwu Rom.
A mụrụ Hypatia na Alexandria, isi obodo nke dayọsis Rome nke Egypt. Otutu ihe omuma banyere nna amara ma o nweghi ihe obula gbasara nne. Nna ya bụ onye ọkà ihe ọmụma na mgbakọ na mwepụ ma raara onwe ya nye ịkụzi ihe na Museum of Alexandria. Ihe karịrị otu narị ndị nkuzi bi ebe ahụ sonyere na ebe a na-edebe ihe ochie a, ọtụtụ ndị bịara bido ikwu okwu.
Dika aghotara ya site na omumu na ihe edere edere nke oge a, Theon choro ka nwa ya nwanyi gho mmadu zuru oke. Ya mere, o mere ihe niile iji hụ na nwa ya nwanyị nwetara agụmakwụkwọ sayensị zuru oke. Hypatia, na ndụ ya niile, gara Atens na totali iji nweta ụfọdụ nkuzi na nkà ihe ọmụma. O biri ndu nwata ya site na gburugburu ulo akwukwo na nke ndi omenala. Nkà mmụta ihe ndị ọzọ sokwa n'ihe gbasara mgbakọ na mwepụ na nkà ihe ọmụma mee ka mmadụ nwee obi ụtọ na Hypatia. Nke a bụ n'ihi na o nwere mmasị n'ịchọ ihe a na-amaghị ama.
Ahụ Hypatia O nwere ezigbo mma na ya lekwaara ahu ya anya. Ọ bụghị naanị na ọ na-etinye oge na awa nke ụbọchị ịmụ na mmụta, mana ọ nọkwa na-eme kwa ụbọchị nke na-eme ka ọ nwee ahụ ike na uche na-arụ ọrụ. Enye ama enyene n̄wọrọnda edu ye ukeme owo. Otú ọ dị, ọ jụrụ ịlụ di ma ọ bụ nwunye iji nyefee onwe ya kpam kpam na sayensị. Ọ bụrụ na ọ lụrụ nwanyị, ọ nwere ike ọ gaghị enwe nraranye ọ bụla ọ nwere na sayensị.
Ruo afọ 20 ọ raara onwe ya nye ịkụzi ihe ọmụma a niile na Museum of Alexandria. Ọ bụ nwanyị nwere njirimara dịpụrụ adịpụ nke raara nye echiche na nkuzi. Ekele ya, ha nwere ike ịbanye n'otu ụlọ akwụkwọ nke ndị isi ala ndị nwere ọkwá dị elu. O dere akwukwo banyere mbara igwe, geometry, algebra, ma melite nhazi nke astrolabe oge ochie.
N'iburu ọchịchọ ịmata ya nke mbara igwe, o jisiri ike depụta ihe ndị dị na mbara igwe, na-abịa ime atụmatụ zuru ezu. Onweghị n'ime ọrụ Hypatia echekwabara, mana a ma ha maka ndị na-eso ụzọ kachasị mkpa ọ nwere, dị ka Sinesio nke Cyrene na Hesychius nke Alexandria. Mgbe ọ na-akụzi nkà ihe ọmụma, ọ lekwasịrị anya n’ọrụ Plato na Aristotle. Hylọ Hypatia ji nwayọọ nwayọọ ghọọ ebe ndị mmadụ bịara mụta banyere nkà ihe ọmụma.
Orestes natara ndụmọdụ dị iche iche site na Hypatia na ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Ọ ghọrọ nwanyị a ma ama n'ihi ịbụ onye ndụmọdụ nye obodo kachasị elu na Alexandria. Ọ bụkwa na ndị ọka ikpe bịara ịdụ n'okwu banyere okwu obodo ahụ.
Ikwesị ntụkwasị obi ya nye ikpere arụsị n'oge Iso Christianityzọ Kraịst na-arị elu bụ mmalite nke ihe ndị mere o ji nwụọ n'aka Ndị Kraịst e buliri elu. Ọnwụ ya mere na nnupụisi ndị Kraịst n'ihi ikpere arụsị mgbe ọ dị nanị afọ 45.. Ọnwụ ya kpatara nnukwu ọgba aghara n'ihi igbu nwanyị nke pụtara iche maka ọrụ ya na ụwa nke sayensị na nkà ihe ọmụma bụ mpụ ihe ihere nye Ndị Kraịst.
Dị ka ị pụrụ ịhụ, okpukpe dị iche iche egbuwo ọtụtụ ndị ọgụgụ isi n'akụkọ ihe mere eme nile. O di nwute na echebebeghị omume na omume Hypatia. Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere otu n'ime ụmụ nwanyị kachasị mkpa n'ụwa nke sayensị na mgbakọ na mwepụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Nkewa » Ihe omuma nke Hypatia